Nidaamka daabacaadda Sublimation
Waa maxay habka daabacaadda sublimation daabacaadda wareejinta Sublimation marka hore waxay isticmaashaa daabacaadda si ay ugu daabacdo midabyo daabacan oo gaar ah warqadda gudbinta, ka dibna kululaato oo cadaadiso si loogu wareejiyo dheehyada dharka. Gaar ahaan, waxay ku saleysan tahay astaamaha sublimation ee kala firdhinta dheehyada, xulo disper ...
T-shaati-yada ayaa hada ah cunsurro caan ah
T-shaati-yada ayaa hada ah cunsurro caan ah. Waxay yihiin wax iska caadi ah, fudud oo raqiis ah. Waxaa raadsada dadweynaha. Marka imisa nooc oo funaanado ah ayaa suuqa yaal, oo marka asxaabtu is urursadaan oo wax cunaan, wasakhda ayaa ka daadanaysa dharka. Sidee loo nadiifiyaa? 1. Shaatiga ka rogo kahor intaadan maydhin, si ...